Haween dhiigbax ugu geeriyooday Hoosingow | sowora
← Education and Training of Women In Focus education banner
Isis militants are ‘using mentally challenged children as suicide bombers and crucifying others’, says UN body →
Ilaa 5 haween ah ayaa toddobaadkan dhexdiisa ku umul raacay tuulada Hoosingow ee gobolka Jubbada Hoose, sida ay Ergo u sheegeen dadka deegaanka.
Haweenkan ayaa foosha ku dhiig-baxay, tuulada oo aan adeegyada caafimaadka laga heli karin ayaana sababtay inay dhiig-baxaas u geeriyoodaan.
Xuseen Warsame Muumin oo ka mid ah odayaasha tuulada ayaa sheegay in goobta ugu dhow ee ay adeegyada caafimaadka u doontaan ay tahay xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee Kenya, oo tuulada u jira 130km, balse ay dhib ku qabaan helidda sharciga looga gudbayo xadka.
“Ciidamada AMISOM ee deegaanka jooga, ayaa noo sameeya warqad aan ku aadno Dhadhaab, laakiin waxay qaadataa ilaa 1o maalmood, intaad sugeyso ayuuba qofkii dhimanayaa,” ayuu yiri.
Nimco Sheekh Maxamed, oo ka mid ahayd shantii haween ee toddobaadkan dhiig-baxa u geeriyooday ayaa foolaneysay muddo 4 beri ah, iyadoo intii lagu guda jiray helidda warqadda sharciga ay nafbaxday.
Xuseen ayaa sheegay in dadka tuuladu ay yihiin dad abaarihii ay uga le`deen xoolaha, haweenkuna ay yihiin kuwo nafaqo darro ay ka muuqato, ayna yihiin kuwa ugu daran ee ay saameeyeen la`aanta adeegyada caafimaadka, oo 80% ay u dhintaan dhiig bax.
Fardowso Sahal oo ka mid ah haweenka ku nool Hoosingow, oo leh toddoba carruur ah ayaa Ergo u sheegtay in haweenka uurka leh ay mar walba filan karaan inay ku geeriyoodaan foosha, haweeney walboo dhashana ay ku dhibtooto mar walba foosha.